Nairobi:Daawo cusub oo loo helay Kansarka dhuunta & Ilmo galeenka oo Kumanaan Kenyan ah rajo gelisay | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Nairobi:Daawo cusub oo loo helay Kansarka dhuunta & Ilmo galeenka oo Kumanaan Kenyan ah rajo gelisay
Published: March 21, 2014, 8:43 am
Dhakhaatiirta Isbitaalka Qaranka Kenyatta ee Nairobi ayaa ku guulaystay in ay u isticmaaleen Lopinavir, oo ah dawo loo isticmaalo cudurka fayruska HIV-ga, inay ku daweeyaan 40 dumar ah oo qaba kansarka gala dhuunta xubinta taranka, sida ay muujisay warbixin laga soo saaray tijaabo lagu sameeyay dhakhtarka oo 6-dii March la soo saaray.
Dhakhtar Innocent Orora Maranga, oo ah dhakhtarka dumarka cilmi-baadhe sarana ka ahaa tijaabada, ayaa u sheegay Sabahi in tijaabadu ay ka timid cilmi-baadhis shaybar oo uu la sameeyay koox dhakhaatiir kale ah oo ka socda Jaamacadda Manchester ee Ingiriiska 2006-dii oo lagu eegayay u isticmaalka dawada fayruska ka hortagta daweeynta kansarka.
“Manchester waxaan ku sameeynay dhowr baadhitaan oo shaybaar ah, waxaana lixdii dawooyinka HIV-da ahaa ee lagu eegay fayruska human papilloma (HPV), oo ah fayruska laga qaado kansarka, ay Lopinavir kaliya noqotay mid 100% shaqeeysay maadaama ay aad u adkeeyd, taas oo u sahashay in ay disho unugyada kansarka,” ayuu yidhi.
Shaqaale farmashiye oo dawo siinaya bukaan jooga Isbitaalka Degmada Mbagathi ee Nairobi, halkaas oo kalkaaliyayaashu ay shaqo joojin ka sameeyeen March 2012 taas oo ku dhawaatay in ay shaqada xarunta gabi ahaanba joojiso. [Tony Karumba/AFP]
Marka la eego natiijooyinkan, Maranga wuxuu helay oggolaansho ah inuu tijaabo ku sameeyo dhakhtar Kenya ah taas oo ka bilaabatay Isbitaalka Qaranka Kenyatta bishii February 2013, ayuu yidhi.
Bukaanka 40-ka ah oo loo doortay tijaabada14-ka bari ah ayaa lagu daweeyay boomaato si khaas ah looga sameeyay Lopinavir oo loo sameeyay in si toos ah loogu isticmaalo dhuunta xubinta taranka dumarka.
“Boomaatada ayaa si sahal ah u milmaysa si dhaqso ahna u marsamaysa marinka dhalmada dumarka halkaas oo laga helo unugyada kansarka,” ayuu yidhi Maranga. “40-ka dumarka ah, oo dhammaantood qabay HPV-ga ama ah heerka sare, meel dhexe ama heerka hooseeya, ayaa lagu daweeyay hal kaabsal oo ah daawada ka hortagga fayruska maalintii labo goor muddo labo usbuuc ah.”
“Haddii aan bukaanka afka ka siin lahayn kaabsalka ama sharoobo waxaa ka iman kari lahaa inay dawadu ka badato, taas oo ay ka iman kartay saamayn kale oo aad u dhib badan,” ayuu yidhi Maranga. “Boomaatadu waxay ahayd doorka ugu fiican waayo dadka kuma aysan keenin saameeyn cun inkasta oo ay aad culays u ahayd.”
Ka dib 90 maalmood, unugyada dhuunta ilmo-galeenka ee 21 ka mida 23 dumar ah oo markii hore lagu sheegay “heer-sarreeya” oo cudurka ah ayaa ku soo noqday caadi, waxaana labo ka mida dumarka hoos loogu dhigay heerkii unugyada kansarka “mid hoose”, ayuu yidhi. “Dumarka 17-ka ah oo markii hore lagu sheegay cudurka heer dhexe ama inuu hooseeyo ayaa sidoo kale muujiyay inay soo roonaadeen,” ayuu raaciyay.
Bukaanka ayaa dib loo baadhay toban bilood ka dib waxaana laga helay isla natiijadii.
Waxaa u dheerayd in natiijada baadhitaanka Papanicolaou (Pap smear) uusan cudur muujin, in raajooyinkii laga qaaday dhuunta ilma-galeenka ay si cad u muujinayeen in ay yaraadeen nabrihii dhuunta ilmo-galeenka ee bukaankii ka qeyb galay tijaabada iyadoo aan lagu arkin wax saameeyn xun ah oo lala xidhiidhiyay, ayuu yidhi Maranga, taas oo macnaheedu yahay in ay si fiican u bogsadeen bukaanku.
Dhammaan bukaankii ka qayb galay wareeggii koowaad ee tijaabada waxaa lala socon doonaa 12-ka bilood ee soo socota, ayuu yidhi.
Waxaa macquul ah in wax weyn laga baddalo dawaynta kansarka dhuunta ilmo-galeenka
“Waxaan aragnay dumar uu heerka cudurkoodu sarreeyay oo uu dhuunta ilmo-galeenkoodu ugu soo noqday caafimaad qab muddo aad u yar,” ayay dhakhtarad Lynne Hampson, oo cilmi-baadhe ka ah Jaamacadda Manchester Kulliyadda Culuunta Kansarka oo ka shaqeeynaysa tijaabada, ka sheegtay warbixin la siiyay saxaafadda oo lagu qabtay Isbitaalka Qaranka ee Kenyatta markii natiijada cilmi-baadhista la shaaciyay 6-dii March.
“Markii loo eego tijaabo isbitaal oo bilow ah, natiijadu waxay ka fiicnaatay maladeennii,” ayay tidhi. “Waxaan ku qanacsannahay in haddii la sii kordhiyo dawada iyo muddada daweeynta ay ka sii fiicnaaneeyso faa’iidadeedu. Waxaan rajaynaynaa in dawadani ay leedahay rajo ah inay wax weyn ka baddasho maareeynta cudurkan, khaas ahaan waddamada soo koraya sida Kenya.”
Joselyn Akinyi, oo ah 30-jir deggan Kibera oo heer sarreeya oo cudurka kansarka seerfikada lagu sheegay January 2012, ayaa sheegtay in ay ku jirtay dumarkii ugu horreeyay oo la marsiiyo tijaabada.
“Kama shallayto qabo inaan ka qeyb qaatay waayo si buuxda ayaan u raystay,” ayay u sheegtay Sabahi, iyada oo sheegtay in haddii aysan helin dawadan lagu sameeyn lahaa qalliin looga saari lahaa ilmo-galeenka.
“Waxaan ogahay in ay jiraan dumar badan oo isla xaaladdii aan ku sugnaa ku jira oo caawinaad u baahan taas oo iman karta kaliya haddii natiijadan tijaabada la hormariyo,” ayay tidhi. “Waxaan ku ducaysaneeynaa in dhakhaatiirtu ay habeen iyo maalinba ka shaqeeyn doonaan in ay hubiyaan in [dawadan] la geeyo waddanka oo dhan oo la siiyo dumarka saboolka ah ee Kenya oo wajahaya geeri laga fursan karo kansarka dartiis.”
Mary Kamau, oo 27 jir, guri joog ah kuna nool xaafadda Koyale ee ku taal Nairobi, ayaa sheegtay in laga helay Kansar gala dhuunta ilma-galeenka dumarka oo aad u sareeya bishii February 2014.
Iyadoo sugitaanka qeybta dambe ee baaritaanada uu keeni karo khatar in uu galiyo noolaansha Kamau, ayay tidhi, “Natiijadan waxay siinaysa rajo haween badan oo kale.”
“Waxa kaliya ee ii banaan in la i qalo,” ayay tidhi, iyadoo ku dartay in loo qorsheeyay in minka laga saaro bisha April.
Baadhitaanka ku xiga ayaa la filayaaa in uu daweeyo 3,000 oo haween ah
Madaxa sare ee Isbitaalka Qaranka ee Kenyatta Lily Koros Tare ayaa sheegtay in isbitaalku uu taageeri doonaa cilmi baarista mustaqbalka ah.
“Natiijooyinka ayaa ah jid si rakhiis ah oo fudud oo loola dagaalamo cudurka kansarka,” ayay Sabahi u sheegtay. “Markii hore bukaanka waxay ku tiirsanaayeen qalliin ama in ay helaan cirbado talaal ah si looga hortago [HPV], taasoo ahayd qaali iyo oo aan ahayn fiican oo lagu daweeyo cudurka.”
Sida ay sheegtay Tare, in ka badan 2,454 kiis oo ah cudurka gala dhuunta ilmo-galenka dumarka ayaa lagu sheegay Kenya. Kuwaas, 1,676 ka mida ayaa sannadkii. Isbitaalka Qaranka Kenyatta waa mid ka mid ah labada isbitaal ee bukaanka loo soo diro waddanka gudahiisa.
Dhakhtar Peter Gichangi, oo kormeerayay baadhitaankii koowaad ee isbitaalka, ayaa Sabahi u sheegay tijaabada ku xigta ay ka mid noqonayaan 3,000 oo haween ah waxaana la qorshaynayaa in ay bilaabato August haddii guddiga kormeerka baarista caafimaadka laga helo oggolaansho iyo helista lacagta.”
“Haddii natiijada ay fiican tahay, markaas dawadan waxaa la siin doona dhammaan shacabka u baahan,” ayuu u sheegay Sabahi, isaga oo ku boorriyay dumarka oo dhan in ay ka hortag sameeyaan oo ay baadhitaan isku sameeyaa si mar hore loo ogaado cudurka.
DAAWO VIDEO: Farxiya Kaba yare oo ciidanka xoogga Ilmo & oohin ka keentay Bandhig Yaab Lahaa…?
Muqdisho: Horumar aysan weli gaarin dalal badan, oo shaaca laga qaaday